Robert Boyle (1627 - 1691) Biographie
Robert Boyle dia teraka tamin'ny 25 Janoary 1627 tany Munster, Irlandy. Izy no zanakalahy fahafito sy faha-efatra ambin'ny folo faha-ambin'ny folo an'i Richard Boyle, Earl of Cork. Maty tamin'ny 30 Desambra 1691 izy tamin'ny 64 taona.
Mangataha amin'ny Fame
Mpanao fihetsiketsehana mialoha ny endriky ny zava-manan'aina sy ny toetoetran'ny vacuum. Fantatra tsara indrindra ho an'ny lalàna Boyle .
Fanamarinana mivaingana sy Publications
Mpanorina ny Fikambanana Royal ao Londres
Mpanoratra: Ny fanandramana vaovao Physio-Mechanicall, mikasika ny lohataonan'ny rivotra sy ny fiantraikany (Made, amin'ny ampahany betsaka, amin'ny milina fiovàna vaovao) [ (1660) Mpanoratra: The Skeptical Chymist (1661)
Ny lalàna Boyle
Ny lozam-pifamoivoizana tsara fanta-daza antsoina hoe Boyle dia hita ao amin'ny appendice nosoratana tamin'ny 1662 tamin'ny New Experiments Physio-Mechanicall, ny fikisihana ny lohataona amin'ny rivotra sy ny fiantraikany (natao ho an'ny ampahany betsaka amin'ny milina fiovàna vaovao) [[ 1660). Amin'ny ankapobeny, ny lalàna dia manambara fa ny setroka amin'ny hafanana tsy miovaova , ny fiovan'ny tsindry dia mifanohitra amin'ny fiovan'ny volombava.
Boyle dia nanao fanandramana maro momba ny toetry ny rivotra "raikibo" na ambany. Nasehony fa tsy mandeha amin'ny vaksiny ny feo, mandrehitra ny lelafo ny afo ary ny biby dia mila rivotra hiaina. Ao amin'ny appendice misy ny Lalàn'i Boyle, izy koa dia miaro ny hevitra hoe misy vaksim-po mety hisy ny toerana misy ny finoana malaza tamin'izany fotoana izany.
Ny tsy fahampian'ny Chimico na Chymico-ara-batana ara-batana sy paradoxa
Tamin'ny taona 1661 dia nivoaka ny The Chymist Skeptical ary heverina ho zava-bita amin'ny ankapobeny i Boyle. Manohitra ny fomba fihevitr'i Aristote izy momba ireo singa efatra amin'ny tany, ny rivotra, ny afo ary ny rano ary ny fankasitrahana ny zava-manan'aina misy vatosoa (atôma) izay niorina tamin'ny fananganana antoko voalohany.
Ny teboka iray hafa dia ny mipetaka ireo singa fototra ao anaty rano, fa tsy toy izany ao anaty vata. Noporofoiny ihany koa fa ny tontolon'ny lalàna matematika tsotra dia azo lazaina hoe izao tontolo izao.
John Dalton Biography sy ny zava-misy
Johan August Arfwedson Biographie
Resaka Bomb Bomb
The Planers Home Plan
Ireo 10 Top MLB Players avy any Meksika
Fomba hankalaza ny Volana feno fahavaratra
6 Movies Movies Tyrone Power
Fikojakoana Disc-disconnected na varahina
Fampidirana - inona no fampidirana?
Inona no atao hoe redundancy?
Kolontsaina Linearbandkeramik - Innovative Eoropeanina
Charles Hamilton Houston: Mpisolovava ny zo sivily sy ny Mentor
Chords Children's Songs
Teny nalaina izay miteraka fahatsiarovana an-tsekoly
Tolotra ejipsianina fahiny ho an'ny ankizy
Chlorine Bleach Lafy ny fiainana
Polysemy (Teny sy heviny)
Inona no dikan'ny Isogloss amin'ny fiteny?
Belmont dia nahazo mpandresy
Ny Fiangonana Episcopal African Methodist: Voaloham-bolo mainty any Etazonia
10 Fampianarana Mahaiza Mampiasa ao amin'ny Efitrano fianaranao
Ahoana no hilalao azy?
Ny fitsapana ataon'ny tarika roa ao amin'ny Baiboly
Prashad - Fanolorana
Ahoana ny fiasan'ny Febreze?